I-Asparagus eluhlaza ne-Sauce Ebomvu Garlic | Ukupheka Kwekhishi
Loreto | | Okufakiwe Okushisayo, General, Ungadliwa Kwemifino, Amasaladi
Ukudla imifino kunempilo futhi kwesinye isikhathi bangaba ngandlela thile abangenangqondo, kepha lokho kumane nje kuyindaba yokubeka umcabango nokufuna isisombululo ezine-flavour ecebile.
Namuhla ngiletha ezinye isilimo esinengono emnandi edliwayo oluhlaza nesosi ebomvu kagalikhi. Yize le recipe ibukeka ingajwayelekile, uzobona ukuthi ikugcina kanjani ekugcineni futhi uma kungenjalo, Sihlala sinomthetho wethu wegolide, silungisa ngomcabango.
Njengenjwayelo siyothenga futhi siyabazi abanye osayizi.
1 bunch of asparagus wasendle
usawoti kanye namafutha
Njengoba ubona izithako zilula. Siqala ngokubilisa i-asparagus kancane, ukuze ithambe, kepha hhayi kakhulu kusukela lapho Sizobanikeza ukuthinta kokugcina epuletini. Nini asibalungiselele, sibadlulise ngepuleti nge amaconsi ambalwa kawoyela bese sifaka usawoti kuwo.
Manje engilazini, senza u-sauce, amafutha amabili ngeviniga eyodwa, inani lizoya maqondana ne-asparagus, njalo kuqala kusuka ku- lesi sisekelo bese usiphindaphinda ngokulinganayo. Sifaka isipuni se-paprika, usawoti omncane bese usika ugalikhi omncane.
Siyakuvumela usoso lukhula kancane, ngoba kungenjalo ngeke kube nama-flavour achaziwe futhi singahlanganisa isidlo.
Sibeka isilimo esinengono emnandi edliwayo bese uwafaka ngososo esilungiselele wona.
Ngokunengqondo le sauce ingahluka futhi singashintsha nemifino futhi siyenze, isibonelo nge-zucchini encane esikiwe.
Manje ngedwa Kufanele ngikufisele inhlanhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » I-Asparagus eluhlaza ne-Sauce Ebomvu ye-Garlic
UVega vegama kusho
Ngangicebile: D, kunalokho, iresiphi enhle
Phendula u-Vega Vegama